कल्पना र रमेश प्रसाई बीच प्रेमको चर्चा भै रहंदा अ’चा’न’क नन्दा सिंहसंग बिवाह हुने भएपछि रमेश प्रसाई ले मुख खोले ! – AB Sansar
December 3, 2020 December 3, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on कल्पना र रमेश प्रसाई बीच प्रेमको चर्चा भै रहंदा अ’चा’न’क नन्दा सिंहसंग बिवाह हुने भएपछि रमेश प्रसाई ले मुख खोले !
काठमाडौं । पछिल्लो समय ‘रिं;के:बु:ङको राँगो’को गीतका कारणले चर्चामा रहेका गायक रमेश प्रसाई विवाह बन्धनमा बाँ:धिने भएका छन् । उनले कालीकोटकी समाजसेवी नन्दा सिंहसँग विवाह गर्न लागेका हुन् । ३ वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई रमेश र नन्दाले बिवाहमा परिणत गर्न लागेका हुन् ।
अबल वक्तृत्व क्षमताका कारण फलोअर्स कमाएका रमेशलाई पछिल्लो समय ‘रिं:के:बुङ:को राँ:गो’ बोलको गीतले चर्चामा ल्याएको छ । उनी पछिल्लो समय इन्द्रेणीमा समेत आवद्ध छन् । इन्द्रेणिमा दोहोरी गाउँदा गायक कल्पना दाहलसँग विवाह गर्ने कुरा गितमा समेटिएपनि गितमै सिमित हुने भएको छ ।
मेरी बास्सैमा अभिनय गरेर चर्चा कमाएकी मुईयाले दिइन् दोस्रो सन्तानलाई जन्म फेरी पुत्रि लाभ (भिडियो हेर्नुहोस)